Apple Music inosvika mamirioni makumi matatu nevanyori | Ndinobva mac
Apple Music inosvika mamirioni makumi matatu nevatanhatu
Zvinotaridza kuti mumwedzi wapfuura, Apple inomhanyisa mimhanzi sevhisi yanga ichiisa mabhatiri, kubvira Mumazuva makumi matatu chete, ivo vakakwanisa kuwana vanopfuura mamirioni maviri vanyoreri, sekureva kwaEddy Cue, mutevedzeri mukuru weApple weInternet, Software neMabasa.
Eddy Cue akapa ruzivo urwu panguva yehurukuro yaakapa mumamiriro eSouthwest Festival. Asi Cue akapawo chidimbu cheruzivo icho Apple yakanga isina kutaurirana parizvino, ndiyo huwandu hwevashandisi varikushandisa nguva yekuyedza yemwedzi mitatu yakapihwa nekambani.
Sekureva kwaCue, pane izvozvi Mamirioni masere vanyoreri vari kuyedza mimhanzi yekushambadzira sevhisi, vashandisi avo, mushure memwedzi mitatu yenguva yekutongwa, vanozokwanisa kujoina huwandu hwese hwevanyoreri vane iyo kambani, kana kusarudza kuzvinyoresa uye kuyedza kushambadzira mimhanzi sevhisi inopihwa neSpotify, sevhisi yemahara nezviziviso uye izvo pari zvino. ine vanopfuura mamirioni makumi mapfumbamwe vanoshandisa pasi rese, zvinoenderana nenhamba dzichangoburwa dzakapihwa nekambani yeSweden, kambani zvinoenderana nenhamba dzayo dzazvino ine vanyoreri vanobhadhara vanosvika mamirioni makumi manomwe neshanu.
Mumavhiki ari kuuya, Spotify pakupedzisira anoronga kuita enda kuruzhinji, mukuita kwave kunonoka makore mazhinji, uye kwaanoda kurega nayo kuve kambani ine kurasikirwa, nekuda kwemubhadharo wakaderera unogadzirwa nerudzi urwu rwebhizinesi, sekureva kwaJimmy Iovine muhurukuro yekupedzisira yaakapa mavhiki mashoma apfuura paunobvunzwa nezve kubatsirwa kwerudzi urwu rwebasa. Cue akashandisa chimiro cheiyi bvunzurudzo kuzivisa kutengwa kwekambani Texture, magazini yekunyorera sevhisi, yakafanana neSpotify uye iyo yatinowana nayo anodarika mazana maviri emagazini pamubhadharo wepamwedzi we $ 200.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Music inosvika mamirioni makumi matatu nevatanhatu
watchOS 4.3 beta 5 yakaburitswawo nezuro husiku
Nyatso gadzira iyo Messages app paMac